Tantaran'ny sarontava - Vaovao - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Sina no firenena voalohany teto amin'izao tontolo izao nampiasa sarontava.
Tamin'ny andro taloha, mba hisorohana ny fahalotoan'ny vovoka sy ny fofonaina, dia nanomboka nanarona ny vavany sy ny orony tamin'ny landy landy ny olona tao amin'ny fitsarana.
"Mencius · From Low" firaketana: "maloto i Xi Zi, avy eo manarona ny orony ny olona rehetra ary mandalo.
Tena tsy voadio ny manaron-orona ny tananao amin'ny tananao na ny tananao, ary tsy nety ny nanao zavatra hafa. Taty aoriana dia nampiasa lamba landy ny olona sasany hanaronany ny orony sy ny vavany.
Tao amin'ny bokiny The Travels of Marco Polo, Marco Polo dia nitantara ny zavatra niainany niaina tany Chine nandritra ny fito ambin'ny folo taona.
Ny iray tamin'izy ireo dia nilaza hoe: "Ao amin'ny lapan'ny tarana-mpanjaka Yuan, izay rehetra nanolotra sakafo dia nanarona lamba vava landy ny vavany sy ny orony mba tsy hikasika ny sakafony ny fofonainy."
Ny lamba landy manarona ny vava sy ny orona no sarontava voalohany.
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-13 dia tsy niseho tany amin'ny fitsarana sinoa ihany ny sarontava.
Mba hisakanana ny fofonain'izy ireo tsy hahatratra ny sakafon'ny mpanjaka dia nampiasa lamba kofehy landy sy volamena ny mpandroso sakafo mba hanaovana saron-tava
Ny sarontava dia nanomboka nampiasaina tamin'ny fitsaboana tamin'ny faran'ny taonjato faha-19.
Nanomboka nanoro hevitra ireo mpiasan'ny fahasalamana i Lederch, mpikaroka alemanina, hampiasa ny saron-tava mba hisorohana ny aretina mikraoba
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, ny sarontava dia nanjary nilaina tamin'ny fiainam-bahoaka.
Rehefa namely an'izao tontolo izao ny gripa Espaniôla, namono olona sahabo ho 50 tapitrisa, dia nangataka ny hisaron-tava ny olon-tsotra mba hiarovan-tena amin'ny otrikaretina.
Tamin'ny tapaky ny taonjato faha-20 sy faramparan'ny taonjato faha-20, ny sarontava dia matetika nampiasaina tamin'ny ambaratonga lehibe.
Ny sarontava dia nitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana sy fanakanana ny fihanaky ny mikraoba mandritra ny areti-mifindra gripa maromaro teo amin'ny tantara.
Tamin'ny volana martsa 1897 dia nampiditra fomba fandrakofana ny vavan'ny vava sy ny orona amin'ny gauze i Medici alemà mba hisorohana ny fidiran'ny bakteria.
Taty aoriana, nisy olona nanao sarontava saron-tava enina, izay nozairina teo amin'ny vozon'akanjo ary nampiasainy mba hanaronana ny vava sy ny orona.
Na izany aza, ny sarontava dia tsy maintsy tazonina foana, izay tena manelingelina.
Avy eo nisy olona tonga nitady fomba hamatorana tadiny amin'ny sofina, ary io no lasa sarontava ampiasain'ny olona ankehitriny.
Tamin'ny 1910, rehefa nipoaka ny areti-mandringana tany Harbin, Sina, Dr. Wu Liande, izay mpitantana lefitra ao amin'ny College College Medical any Beiyang, no namorona ny "mask Wu".
Tamin'ny 2003, ny fampiasana sy ny famoahana ny sarontava dia nahatratra ny fara tampony vaovao. Ny valanaretina SARS saika nahatonga ny saron-tava namidy nandritra ny fotoana kelikely. Nisy filaharana lava be manoloana ireo fivarotam-panafody lehibe ary nirohotra hividy sarontava ny olona.
Tamin'ny taona 2009, taorian'ny areti-mandringana "bird flu" tamin'ny 2004, ny gropy H1N1 dia nitondra tafon-tava ho an'ny mpampahalala vaovao manerantany indray.
Ny fisian'ny hevitra momba ny loza ateraky ny rivotra PM2.5 tamin'ny 2013 dia nahasarika ny sain'ny besinimaro ny fahalotoan'ny rivotra, nahatonga ny sarontava sy vokatra fiarovana hafa ho malaza mandritra ny andro manjombona.
Tamin'ny 7 Febroary 2020, mpiasa mpitsabo sy mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 30 ao amin'ny Ivon-toerana famonoana otrikaina sy famatsiana hopitaly fianianana faharoa ao Xi 'an University Jiaotong no nanao sarontava tamin'ny fampiasana fitaovana toy ny lamba tsy tenona amin'ny fonosana ara-pitsaboana, taratasy mifoka ary famafazana lelona N95 lamba sivana ho an'ny zavamaneno.